"I-Deep State" iTheory, ichazwa kwaye ichazwa
Imbewu yeengcamango ezininzi ezinengqondo, igama elithi "isimo esingqongileyo" eUnited States lithetha ukuba kukho umzamo owenziwe ngaphambili ngabasebenzi abathile baseburhulumenteni okanye abanye abantu ukuba baphathe okanye balawulwe ngasese urhulumente ngaphandle kwemigaqo yeCongress okanye uMongameli eUnited States .
Umvelaphi kunye neMbali ye-Deep State
Umbono wendawo ephantsi - ebizwa ngokuba "ngurhulumente ngaphakathi kwiphondo" okanye "urhulumente wezithunzi" - isetyenziswe okokuqala ngokubhekisele kwiimeko zezopolitiko kumazwe afana neTurkey kunye ne-post-Soviet Russia.
Ngexesha lama-1950, umbutho onxamnye nentando yesininzi ngaphakathi kwenkqubo yezopolitiko yaseTurkey ebizwa ngokuba yi " derin devlet " - ngokoqobo "imeko ephantsi" - ngokuqinisekileyo yazinikela ekuxoseni ii-communist ezivela kwiRiphabliki entsha yaseTurkey eyasungulwa nguMastafa Ataturk emva kweMfazwe Yehlabathi I. Yenziwe ngamanqaku ngaphakathi kwinqanaba lezempi laseTurkey, ukhuseleko kunye namagqwetha, i- derin devlet isebenze ukuguqula abantu baseTurkey kwiintshaba zabo ngokugxeka "ukuhlaselwa kweflegi" kunye nezigwenxa ezicwangcisiweyo. Ekugqibeleni, i- derin devlet yaxelwa ngokufa kwabantu abayiwaka.
Ngama-1970, ayenakuba ngamagosa aseburhulumenteni aseSoviet Union, emva kokusweleka kwi-West, ngokucacileyo ukuba amaPolitiki aseSoviet - i- KGB - yayisebenzisele njengendawo ejulile ezama ukulawula iCawa yamaKhomanisi ngasese kwaye ekugqibeleni, urhulumente waseSoviet .
Kwi-symposium ka-2006, u-Ion Mihai Pacepa, owayengumgadi jikelele kumapolisa aseKomania aseCommunism afihlakeleyo eUnited States ngo-1978, wathi, "KwiSoviet Union, i-KGB yayiphondo kwilizwe."
U-Pacepa waqhubeka wathi, "Ngoku i-KGB yamagosa asebenzayo. Baye bagcinwa kwezixhobo zenyukliya ze-6,000 zelizwe, eziphathiswe kwi-KGB kuma-1950, yaye ngoku ziphinde zisebenzise icandelo leoli leqhinga elichazwe nguPutin. "
I-Deep State Theory e-United States
Ngo-2014, owayengumncedisi we-congressional aid uMike Lofgren uxela ukuba kukho uhlobo oluthile lwamazwe angqongileyo asebenza ngaphakathi kurhulumente wase-United States kwisicatshulwa esithi "I-Anatomy ye-Deep State."
Esikhundleni seqela elibandakanya kuphela amaziko karhulumente, uLofgren ubiza i-Deep state eUnited States "ubudlelwane obunxubileyo bezinto ezikarhulumente kunye neengxenye zemali ephezulu kunye nezoshishino ezikwazi ukulawula iMelika ngaphandle kokubhekiselele kwimvume lolawulo njengoko kuboniswe kwinkqubo yezopolitiko ngokusemthethweni. "U-Deep State, wabhala uLofgren," akayiyo "imfihlo, ityala lokuqhayisa; urhulumente ngaphakathi kwimeko efihlakeleyo ngokubonakalayo, kwaye abaqhubi balo baqhuba ngokubanzi emini. Akuyona iqela eliqinileyo kwaye alikho injongo ecacileyo. Kunoko, yintanethi ejikelezayo, esolula kuwo wonke urhulumente nakuma candelo abucala. "
Ngandlela-thile, i-Lofgren inkcazo yendawo ejulile e-United States ivakalisa inxalenye ye - adress address ye- 1961 ye- President's Dwight Eisenhower , apho wayilumkisa khona abaongameli bexesha elizayo ukuba "balinde ukufumana impembelelo engafanelekanga, ingaba ifunwa okanye ingenasiphelo, yimikhosi yemikhosi bunzima. "
UMongameli uTrump uthembisa uMbuso oMkhulu umchasa
Ukulandela ukhetho loongameli luka2016, uMongameli uDonald Trump kunye nabaxhasi bakhe bacebisa ukuba amanye amagosa aseburhulumenteni angamagama angabonakaliyo asebenza ngokufihlakeleyo njengendawo ekhuselekileyo yokuvimba imigangatho yakhe kunye ne-ajenda yezomthetho ngokuchithwa kolwazi olubaluleke kakhulu.
UMongameli iTump, iNtloko yeNgcaciso yeSigqeba uStephen Bannon, kunye neentengiso ze-ultra-conservative ezifana neBreitbart News zithi uMongameli we-Obama owayengumongameli waseAfrika wayehlaselela ukuhlaselwa kwezulu ngokusesikweni kulawulo lweTrump. Isityholo sabonakala sakhula kwisitatimende esingaqinisekanga sokuthi u-Obama wayala i-wiretapping yefowuni ngexesha lokhankaso lonyulo luka-2016.
Amagosa angoku kunye nabangaphambili bezobuhlakani bahlala behlukaniswe ngombuzo wobukho bobunzulu obusebenzayo ngokufihlakeleyo ukucwangcisa ulawulo lweTrump.
Ngomxholo we-Juni 5, 2017 opapashwe kwi-The Hill Magazine, umhlala-phantsi we-CIA osebenza kwintsimi yokusebenza kwintsimi uGen Coyle wathi xa wayenokungabaza ukuba "amaqela karhulumente" asebenza njengombuso okhuselekileyo wexilongo, wakholwa ukuba iTrump Kwakulungele ukukhalaza malunga nenani lokuvuza elibikwe yimibutho yeendaba.
"Ukuba unomngcipheko kwizenzo zolawulo, kufuneka uyeke, ubambe inkomfa yenkomfa kwaye uchaze uluntu izichaso zakho," watsho uCoyle. "Awukwazi ukuqhuba isebe elilawulayo ukuba abantu abaninzi becinga ukuba, 'Andiyithandi imigaqo yalo mongameli, ngoko ke ndiya kuguqula ulwazi ukuze ndimkhangele kakubi.'"
Ezinye iingcali zengqondo zithi abantu okanye amaqela amancinci abantu abaphazamisa ulwazi olubalulekileyo lolawulo loongameli abanalo ulungelelaniso lwenkqubo kunye nobunzulu beendawo ezinzulu njengalezo ezazikho eTurkey okanye ngaphambili zaseSoviet Union.
Ukubanjwa koMninimzi weNqobo
Ngo-Juni 3, 2017, ikhontrakthi yenkampani yesithathu esebenza kwi-Arhente kaZwelonke yoKhuseleko (NSA) ibanjwe kwiintlawulo zokuphula uMthetho wobuNgcwaba ngokukhupha umqulu ofihlakeleyo ophezulu ngokuphathelele ukubandakanyeka kukaRhulumente waseRashiya kumongameli wase-2016 wase-US unyulo kwintlangano yeendaba ezingachazwanga.
Xa ibuzwa ngu-FBI ngo-Juni 10, 2017, lo mfazi, oneminyaka engu-25 ubudala weReality Leigh Winner, "wavuma ngokuzikhethela nokunyathelisa ingxelo echazwe yintelligence ekhutshwe nangona 'engenakho isidingo sokwazi,' kunye nolwazi Ingxelo yengqondo yahlulwa, "ngokutsho kwefidavithi yeFBI.
Ngokutsho kweSebe lezoBulungisa, uMninimzi "wabuye wavuma ukuba uyazi iziqulatho zeengxelo zeengxelo kwaye wayeyazi ukuba okubhalwe kwimibiko ingasetyenziselwa ukulimala kwe-United States kunye nokuxhamla kolunye uhlanga."
Ukubanjelwa koMninimzi kubemele icala lokuqala eliqinisekisiweyo lomzamo owenziwa ngumqeshwa wangoku urhulumente ukuze alahlekise ulawulo lweTrump. Ngenxa yoko, abaninzi abanokuzikhusela baye bawasebenzisa ngokukhawuleza le meko ukuqinisa iingxabano zabo ezibizwa ngokuba "yinkqubo enzulu" ngaphakathi kurhulumente waseUnited States. Nangona kuyiqiniso ukuba uMninimzi uvakalise esidlangalaleni imizwa yokulwa neTrump kokubili kubasebenzi kunye kunye nakwiimidiya zentlalo, izenzo zakhe azange zibonakalise ukuba kukho ubuqili obunzulu bokuzihlaziya ukulawula ulawulo lweTrump.
Iindlela ezili-10 zokudala ubuGcisa ngaphandle kobugcisa bezakhono
Yintoni eyenziwa yiDinosaurs?
Ininzi yezidumbu zezihlahla zase-US
Iimpawu zeSilwimi zeCress Syress Patterns ngesiNgesi
Ziziphi ii-Best Animated Movies kwi-3D?
Amagama aqhelekileyo adidekile: Vuka kwaye Uvakalise
Yakha i-Elemental Garden yeLitha
Indlela Yokuthetha Nokubhala "Cute" ngesiJapan
Imfazwe YaseMerika: iBristoe Campaign
Kufuneka-Funda Amabhuku Ukuba Wakuvuyela iNkosi yeeNtlanzi